केही रोचक व्हिस्की कथा ---- टावरको कथा-उद्योग समाचार-गोआलङ रक्सी (समूह)
केही रोचक व्हिस्की कथा ---- टावरको कथा
जनवरी २ 01 २०१।
जब तपाइँ Glenturret डिस्टिलरी को गेट मा यो असाधारण "व्यक्ति" को कांस्य मूर्ति को प्रशंसा गर्नुहुन्छ। सिरियल किलरले डिस्टिलरीको अन्न सुरक्षित गर्यो, र यसको हातमा 28,899 मुसा मारिए। डिस्टिलर मुनिको लाशहरू जताततै थिए, र संख्या गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा पनि पुग्यो।
Towser एक बिरालो हो! पौराणिक कथा अनुसार, यो असाधारण बिरालो एक सानो व्हिस्की संग दूध पिउन हुनेछ। यो किन यो धेरै साहसी र शिकार मा राम्रो छ, र यो 23 वर्ष सम्म रहन्छ भनेर व्याख्या गर्न देखिन्छ। यो धेरै प्रसिद्ध छ, डिस्टिलरीले टाउजरसँग व्हिस्कीको ब्यारेललाई पनि नाम दिएको छ। त्यहाँ विशेष रूपमा सानो राउन्ड डिजाइन गरिएको व्हिस्की लेबलमा Towser फोटोहरू छन्।
टावर स्कटिश डिस्टिलरहरू मध्ये सबैभन्दा प्रसिद्ध बिरालो हो। वास्तवमा, लगभग हरेक डिस्टिलरीमा बिरालो हुन्छ। र बिरालो चाँडै डिस्टिलरी को शुभंकर हुनेछ। सन् १९८७ मा टौसरको निधन भएपछि अम्ब्रेले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आफ्ना पूर्ववर्तीहरूसँग तुलना गर्दा, एम्ब्रे टाउजरको शीर्षमा पुग्न गाह्रो छ। भनिन्छ, अम्ब्रेले आफ्नो २२ वर्षको करियरमा कहिल्यै मुसा समातेनन्!
पछि, डिस्टिलरीले टोजरको उत्तराधिकारी चयन गर्न बिरालो संरक्षण समाजसँग सहकार्य गर्‍यो। कुन गतिविधि स्कटिश मिडिया द्वारा रिपोर्ट गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय घटना भयो। घटना स्थलमा, त्यहाँ बिरालो मनोविश्लेषकहरू छन् जसले अन्तर्वार्तामा मद्दत गर्छन्, बिरालाहरू फेला पार्न प्रयास गर्छन् जसले प्रत्येक वर्ष 120,000 आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न सक्छन् र मुसा समात्न पनि जिम्मेवार छन्।
अघिल्लो: कसरी मिश्रित व्हिस्की बनाउने
अर्को: ओक ब्यारेलको प्राविधिक सर्तहरूको बारेमा तपाईलाई कति थाहा छ?